‘बोल मायाँ’ मा अभिनय गर्न नमान्ने हिरोईन को ? खोले प्रकाश सपुतले मुख (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘बोल मायाँ’ मा अभिनय गर्न नमान्ने हिरोईन को ? खोले प्रकाश सपुतले मुख (भिडियो)
‘बोल मायाँ’ मा अभिनय गर्न नमान्ने हिरोईन को ? खोले प्रकाश सपुतले मुख (भिडियो)
May 26, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Music 0
यतिबेला नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रकाश सपुतको ‘बोल मायाँ’ बोलको गीतले अत्याधिक चर्चा पाएको छ । सामजिक सञ्जालमा हत्तादिनदेखि यो गीत लगातार ट्रेन्डिङ ‘वान’मा पर्न सफल भएको छ । केही समय पहिले प्रिति आलेसँग गाएको व्याटलका कारण थोरै विवादमा आएका प्रकाश सपुतले यो गीतका कारण धेरैको मन जित्न सफल भएका छन् । यो गीत यो अन्तरवार्ता रेकर्ड हुँदासम्म १६ लाखले हेरिसकेका छन् । यो गीतको भिडियो हरेर नरुने सायदै होलान् । पुराना तथा निकै लोकप्रिय गायक नारायण रायमाझीको आवाज तथा महिला स्वरमा सान्तीश्री परियारको आवाजले धेरै मानिसको मन जित्न सफल भएको छ ।
त्यसमाथि प्रकाश सपुतको कन्सेप्ट र मोडल अन्जली अधिकारीको अभिनयले आँखामा आँशु झरेको पत्तै हुँदैन । भिडियोको लोकेशन तथा खिचाई काल्पिनिक नभएर वास्तविक जस्तै देखिएको छ । यो प्रायः नेपालीको घरमा घटिरहने घटना भएकाले पनि धेरै नेपालीको मन जित्न र आँशु झार्न यो गीत सफल भएको हो । गीत तयार पारेदेखि सार्वजनिक नहुँदासम्म तथा सार्वजनिक भएपछिको अवस्थाकाबारेमा यो गीत भित्रका मुख्य कलाकारहरुले आ–आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् ।
‘कोरेर मेरो चित्र’ भन्दै दर्शकमाझ आए विश्व नेपाली (भिडियो)